ကချင်ရိုးရာအစားအစာကြိုက်နှစ်သက်ကြသူများအတွက် – FoodiesNavi
By KT On March 12, 2018 0
ဒီနေ့မှာတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအစားအစာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် ကချင်ရိုးရာအစားအစာဆိုင်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆိုင်အမည်လေးကတော့ Sha Yi Kachin Food ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကချင်ရိုးရာအလှအပတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်ထဲမှာကျေနပ်မှုရရှိစေမှာ အသေအချာပါပဲနော်။ ဆိုင်မှာလည်း ကချင်ရိုးရာအစားအစာတွေ စုံလင်လှတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်ရောက်နေသလိုမျိုး စိတ်ထဲမှာ ခံစားမိစေမှာပါ။
ကချင်ရိုးရာအစားအစာတွေထဲက ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အရသာကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဟင်းလျှာလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ အသီးအရွက်အစုံအလင်နဲ့ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ တောင်ပေါ်ဟင်းချိုကလည်း အရမ်းပဲစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ဝက်ခြောက်ကင် ၊ ခရမ်းသီးကင်နဲ့ ငါးဖက်ထုပ်ပေါင်းတို့ကလည်း လက်မလည်အာင် ရောင်းရတဲ့ ဟင်းလျာတွေဖြစ်ပြီးတော့ ကချင်ထမင်းကြော်ကလည်း အရသာ တမူထူးခြားနေတော့ စားလို့အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ မိသားစု စုစုဝေးဝေး စားနိုင်တဲ့ စကောထမင်းကိုလည်း စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ တွေအတွက် အထူးချက်ပြုတ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် ကချင်ရိုးရာအရက်ကိုမှ သောက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း ကောက်ညှင်းဆန်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကချင်ရိုးရာအရက် ၊ ကချင်ခေါင်ရည်လေးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးသုတ်နဲ အစုံသုတ်လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး သောက်လိုက်ရင် ကချင်ပြည်ကို ရောက်သွားသလိုမျိုး ခံစားစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စားချင်စရာပုံလေးတွေကလည်း မြင်လိုက်တာနဲ့ကို စားချင်စိတ်ဖြစ်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကဲ.. သူငယ်ချင်းတို့ထဲမှာ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားအစားအစာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ကချင်အစားအစာတွေကို လွမ်းဆွတ်နေတဲ့သူတွေအတွက် မိသားစုလို နွေးထွေးမှုရှိစေတဲ့ Sha Yi Kachin Food လေးကို တစ်ခေါက်တစ်ခါ သွားစားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်.
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်လေးကတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီအထိ ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ပါတယ်နော်.
ဆိုင်လိပ်စာလေးကတော့ အမှတ်- ၇၆ ၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ မြေညီထပ် ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/SHA-YI-Kachin-FOOD